Rakkoo Siyaasaaf furmaata siyaasaatu barbaachisa-KFO – Kichuu
HomeNewsAfricaRakkoo Siyaasaaf furmaata siyaasaatu barbaachisa-KFO
Rakkoo Siyaasaaf furmaata siyaasaatu barbaachisa. Waraanni biyya gara diigumsaatti geessa’ jechuun KFO’n haala yeroo irratti ibsa laate.
Ibsa KFO’n Onkoloolessa 30.2013 baaseen, Itiyoophiyaa keessa waraanni Lixaafi Kaaba Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiraachuu mirkaneesse. Waraanni kunis biyyattii diigumsatti tarkaanfachiisa kan jedhu Ibsi KFO kun, qaamoleen waraana filatanii jiran kun gaaddisa marii waloo biyyaalessaa KFO’n gaafate deggeruun, mariitti dhufuutu furmaatas jedheera.
KFO’n kanaan dura mariin waloo yoo hin uumamin biyyattiin waraana waliiniitti seenuuf deemti jechuun ibsa baasee ture. Ibsa har’aa keessattis ammas yeroo lammaffaatiif waraanni dhaabbatee mariin akka geggeeffamuu waamicha taasisee jira. Ibsi KFO kun, uummatni biyyattiis waan waraanicha itti caalchisu dubbachuufi gochuurraa akka of qusatan gaafata.
Waraanni qisaasama dinagdee, siyaasaafi waliin jireenyaa dhaqqabsiisa kan jedhu KFO’n, ammas marii hidhamtoota Siyaasaa dabalatee namoota barbaachisoo hirmaachisutu furmaata ta’a malee, waraanni furmaata miti jedheera.
OMN: Oduu Ijoo
Muudamni Abiy Ahimad guyyaa kaleessaa raawwate agarsiiftuu diigama sirna Federaalizimiifi heera biyyattiiti jedhan Ogeeyyiin Seeraa. Onkoloolessa 29 Ministeerri Muummee Itiyoophiyaa kan bara angoosaa fixatee jiru Abiy Ahimad muudama geggeessummaa olaanoo sadarkaa Naannoofi Federaalaatti kennanii jiru. Muudama kanaanis angoo dabalataa kennuufi jijjiirraan bakkaa raawwateera.
Obbo Dammaqaa Mokonnin angoo ittii anaa ministeera Muummichaa malee, ministeera haajaa alaa ta’uun angoo dabalataaf muudamaniiru. Hoogganaa Tika biyyattii ta’uun tajaajilaa kan turan Komishineer Dammallaash G/Mikaa’eel bakka jijjiiruun Komishinii poolisii Federaalaatti kan muudan yoo ta’u, Obbo Tamasgeen Xurunee ammoo Pirezidaantii Naannoo Amaaraarraa kaasuun gara hooggansa Tikaafi basaasaatti muudaniiru.
Dhimma kana ilaalchisuun Ogeessi Seeraa Dr. Maarqos Waggaarii OMN-iif yaada laataniin, “Heerri biyyaattii, adeemsa filmaata ministeerummaarratti waan ifa ta’e ibsee jiraatus, Itiyoophiyaa keessatti, ministeerummaan ajajamaa Ministeera muummichaa ta’uutiin waan safaramuuf gochi akka kanaa waan haaraa miti” jechuun, adeemsi heera hordofu yoo fakkeessuuf ta’e malee dhugumatti raawwatamee hin beeku jedhan.
Itti fufuun “Ministeerumti Muummee amma biyyattii bulchaa jiru kunuu Heera sanaan beekamaa waan hin taaneef, heera ADWUI eeguufi eeguu dhabuun isaaf homaa miti. Biyyattiin yeroo ammaa kana paartii heerri hin beekneen bulaa jirti. ‘Bilxiginnaa’ wanti jedhu, heericha keessa hin jiru. Kanaaf heerri biyyaa kan cabe, yeroo ADWUI caberraa eegaleeti.” jechuun biyyichi heeraan osoo hin taane, murnaan bulaa jiraachuu ibsu.
Yuunvarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta’an, nageenya dhuunfaa isaaniif maqaa isaanii himamuu kan hin barbaadne ammoo “Heerri biyyattii daangaa angoo mootummaa Naannoofi Federaalaa adda baasee kaa’ee utuu jiruu, Abiy Ahimad Pirezidaantii Naannoo filuufi mootummaa naannoo diiguun isaa, abbaa hirrummaafi farra diimokiraasii ta’usaa agarsiisa. Federaalli aangoo naannoo keessa galee, mootummaa ce’umsaa naannoo hundeessuu hin qabu. Amma garuu Dr. Abiy fi murni isaa, mana maree barasaa fixate waliin Mootummaa Naannoo diiguun, angoo Caffee naannoo sarbanii dhimma naannoo keessa seenaa jiru. Kun ammoo waan Sirna Federaalizimii Itiyoophiyaan yayyabatte faallessudha.” jechuun qeeqaniiru.
Dr. Maarqos Waggaarii itti dabaludhaan, “mirgi hiree ofiin of bulchuu Sabootaa cabeera. Naannoo hedduu yoo fudhatte kan bulchaa jiru, saba naannichaati osoo hin taane, Bilxiginnaadha. Kun ammoo adeemsa Sirna Abbaa lafaa kan dur, nama mootummaan fedhu qofti uummata bulchaa ture waliin tokkuma.” Jechuun dhimmicharratti yaada laataniiru.
Dhumarrattis, Uummatni Oromoo diina tooftaa ammayyaatiin eenyummaafi mirgasaa cabsaa jiru kanatti dammaqee, lola diinotasaatiin osoo hin burjajja’in Naannosaa xiyyeeffannaan eeggachuu danda’u qabas jedhanii jiru.
Qeerroon Godina Baalee Aanotaa fi Magaalota hedduu keessa jiraatan murni Afaan Qawweetiin biyya bulchaa jiru Waraana deeggaruu qabdu jechuun hawaasa doorsisaa kan jiran tahuun OMN’itti himan.
Lola Bilxiginnaa fi TPLF jidduutti gaggeeffamaa jiru kana irra aanuuf jecha Murni Afaan Qawweetiin biyyattii bulchaa jiru Qeerroo fi ga’eessootni Oromoo dirqama keessan bahuu qabdu jechuun dirqama itti laachaa kan jiran tahuu maddi keenya Baale irraa yaada isaa nuuf laate tokko ifoomse.
Gama biraatiin Qeerrowwan Oromoo ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa fi Hidhamuu Qabsaa’ootaa fi Hogganoota siyaasaa Oromoo hordofuun hidhamanii jiran lola gaggeeffamaa jiru kana irratti yoo hirmaattan Mana hidhaatii gadi lakkifamtu, san tahuu baannaan Umrii keessan as keessatti lakkaawwattu jechuun Qeerroowwan Oromoo doorsisaa kan jiran tahuu namni dhimma kana itti dhiheenyaan beeku OMN’itti himeera. Gocha raawwatamaa jiru kana Qeerroon Godina Baalee cimsinee Balaaleeffannas jedhan. Nageenya biyya kanaa Tasgabbeessuu keessatti Ummanni Oromoo dursee nagaya argachuu qaba kan jedhan Qeerroowwan Baalee, kana hubannoo keessa galchuun Oromoon mirga ofii kabachiisuu qaba jechuun dhaaman.
Barreessituu Waajjira Adda Biliisummaa Oromoo kan taate, Aadde Meetii Milkoo qaamolee nageenyaa mootummaatiin to’atamuu, Dubbi himaan ABO Obbo Battee Urgeessaa ibsan.
Obbo Battee Urgeessaa toora marsaa hawaasummaa isaaniirratti akka ibsanitti, Aadde Meetii Milkoo barreessituu Waajjira Adda Biliisummaa Oromoo kan taate, Onkoloolessa 29 qaamolee nageenyaa mootummaatiin magaalaa Finfinnee keessaa butamteetti.
OMN hiriyoota hojii fi maatii quunnamuuf waan jiru gaafachuun akka adda baafatetti, yeroo amma kana Meetiin Burraayyuutti geeffamuun mana hidhaa buufata poolisii 3ffaatti hidhamuu ishee mirkaneeffatee jira.
Akka hiriyoonni isii jedhanitti, Bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Saansus jedhamu keessatti qabamuu isii kan himan, sababa qabamuu isii garuu hanga yoonaatti wanti adda baafatan kan hin jirre ta’uu dubbatu. Aadde Meetiin hirmaannaa siyaasaan alatti ogeettii fayyaa ta’uun, ogummaa baratteen hawaasa isii tajaajilaa nama jirtudha.
Godina Harargee bahaa Aanaa kombolchaatti waraanni Sirna Abbaa Irree Itiyoophiyaa maqaa waraana shanee sakatta’uutiin hawaasa nagayaa goolaa jiraachuu maddeen OMNitti himan.
Kombolcha Araddaa Qeerransaatti polisoonni Oromiyaa gandoota Saalii fi Amoolaa jedhamutti jiraattota nagayaa hiraarsaa jiraachuu jiraatan Aanichaa tokko bilbilaan OMNitti himeera.
Akka jiraataan kun nuuf ibsetti waraanni mana taaziyaatti namoota taaziyaa geggeeffachaa jiran irratti reebicha raawwachuun jiraattotarratti goolinsa uumeera.
Waraanni kun Hawaasa nagaayaarratti dhukaasa banuun namni maqaan isaa mahaamad Ussoo yuusuf jedhamu rasaasaan jilbarra rukutamuun miidhaa cimaan kan irra gahe yoo tahu waytii ammaa mana Yaalaatti wal’aansarra jiraachuun ifoomeera. Walumaagalatti Aanaa kombolchaatti guyyaa guyyaan dhukaasni banamaa jiraachuu ibsuun maddi keenya kun mootummaan Abbaa irree kun Dargaggoota ajjeechaa fi hidhaa dheefaf magaalaa keessaa bahan maqaa shanee itti moggaasuun adamsaa jiraachuu ibse.
Xumura irratti Aanaa Kombolchaatti waraana shanerratti tarkaanfii fudhanneen kaan ajjeefnee hedduummoo boojineerra jechuun dhaadannoon Qondaaltonni Bilxiginnaa dhaadataa jiran soba tahuu ibsuun namoonni hidhaman qonnaan bultoota mana taaziyaatti taaziyaa geggeeffataa jiran tahuu ibseeera.
Lixa Oromiyaa Godinalee wallaggaa keessatti dhiibbaan murni humnaan biyya bulchaa jiru Ummata irratti raawwataa jiru hammaatee itti fufe akka jiru maddeen gabaasan.
Namni jiraataa Godina Wallagga bahaa Aanaa Gudayyaa-Biilaa irraa dubbifne tokko akka jedhutti, Network’n bilbilaa magaalota hedduu keessatti laafee jiraachuu ibsuun,haala deemaa jiru sirritti hubachunillee waytii ammaa kana nu rakkisee jira jedha.
Lixa Oromiyaa bakkoota gara garaatti weerara Waraanni sirnichaa gaggeessaa jiruun dhukaasni gaggeeffamaa bula jedheera. Waytii amma haalli godinaalee wallaggaa keessa jiru gaarii miti kan jedhu maddi keenya kun,Galaga sa’aatii 12:00 booda reebichaa fi hidhaan dargaggoota irratti gaggeeffamaa akka jirus himeera.
Qeerroon lixa Oromiyaa kun dhaamsa ummataaf dabarseen, Murni Biltsiginnaa kan humnaan taayitaa dhuunfachuun biyyattii goolaa jiru waytii ammaa lola Tigraay irratti bane xumuruun yoo as deebi’e Oromoo fi Oromiyaa cabsuuf dhaadachaa jira waan ta’eef Ummanni keenya ammuma irraa dammaqee tokkummaa isaa cimsuun diina kana dhuma itti gochuu qaba jechuun dhaameera.
Harargee Bahaa Magaalaa Awwadaayitti hidhaa fi dararaan cimee itti fufeera jedhame.
Har’a ganama sa’aatii 3:30 irraa jalqabee iddoo Jawwaroo jedhamuun beekamu keessatti Poolisoonni idilee dargaggoota nagayaa reebuun hidhaatti darbataa kan jiran tahuu jiraattonni magaalattii OMN’itti himan.
Sababiin dargaggoota kanneen hidhaa jiraniif Magaalattii keessatti hiriirri akka hin dhooneef dursanii dargaggoota adamsaa jiru kan jedhu jiraataan kun guyyoota sadeen darban keessa namoonni 9 ol tahan kan hidhaman tahuu dubbate. Haalli nageenyaa magaalattii keessa jiru yaaddeessaa tahuun wal-qabatee dargaggoonni magaalattii gadi lakkisanii gara Bosonaatti baqachuuf dirqamaa kan jiran tahuu eere.
Magaalaa Awwadaay qofa osoo hin taane Magaalota Naannawa isii fi gandoota baadiyyaa keessa jiran hedduu keessatti gochi fakkaataan akkanaa raawwatamaa kan jiru tahuu ifoomse.
Xumura irratti waytiin amma keessa jirru murteessaa waan taheef Tokkummaan qabsooynee Hoggantoota siyaasaa Oromoo Mana hidhaa irraa baafachuu akkasumas Oromiyaa harka keenyatti deeffachuu qabna jedhaniiru.
Lola TPLF fi Bilxiginnaa jidduutti gaggeeffamaa jiruun qalbiin keenya hatamuu hin qabdu kan jedhan Qeerroowwan kunneen, Ummanni Oromoo Haqaa fi Mirga isaatiif falmachuu qaba jechuun yaada isaanii goolaban.
Jaarsa biyyaa fi Namni qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa bahachaa turan Obbo Bulloo Sheekuu du’aan addunyaa kana irraa boqatan. Jiraataa Godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabbaa kan ta’an Manguddoon kun, bara bulchiinsa Mootummaa Dargii irraa jalqabee qabsoo Ummanni Oromoo taasisaa ture keessatti gahee Oromummaa isaanii bahaa akka turan maatiin isaanii bilbilaan OMN’tti himaniiru.
Dhukkuba tasa isaan mudateen guyyaa kaleessaa galgala Sadaasa 08/2020 lubbuun isaanii darbuu maatiin ibsaniiru. Obbo Bulloo Sheekuu umriin isaanii Nama Ganna 80 akka ta’anis himameera.
Obbo Bulloon Abbaa ilmaan dhiiraa 2 fi Shamarran 4 walumaa galattii Abbaa Ijoollee 6’ti.
Sirni awwaalcha isaanii guyyaa har’aa akka raawwatames maatiin isaanii bilbilaan OMN’tti himanii jiru.
Fact News!: The ABIYI Thousands of troops crossed to Sudan to save their lives when overrun by #BraveTigrayForces .
Must Listen to OMN! Babal’achuu WBO Taayyee Danda’aatu ragaa ba’aa jira!